Vaovao - “mandeha mankany Xiandu ary manolotra fahafoizan-tena ho an'i Xuanyuan”, mpiasa an'arivony ao amin'ny Jinbang Holdings no nahatsapa ny nofinofin'izy ireo “hivavaka amin'ny razana”
Amin'ny volana Novambra, Jinyun dia manana toetrandro mahafinaritra, rivotra ary rahona mahasoa. Tamin'ny marainan'ny faha-21, nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika "Travel to the Xiandu City and Sacrifice Xuanyuan" ny Golden Stick Holdings Co., Ltd. Mpiasa manodidina ny arivo no nivory teo amin'ny fidirana amin'ny làlambe Jinyun Binjiang Park ary nandeha nankany amin'ny Tempolin'i Huangdi ao amin'ny Xuanyuan Huangdi Sacrimental Center any atsimon'i Sina miaraka amin'ny fanantenana feno.
Jinyun Greenway dia naoty ho "Greenway Mahafinaritra indrindra" sy "Làlana maitso tsara indrindra folo" any amin'ny faritanin'i Zhejiang. Sahabo ho 11 kilometatra miala ny Jinyun Riverside Park mankany amin'ny toerana mahafinaritra ny Zhutan Mountain any Xiandu. Ilay vatovato rafozam-bavy, dadatoan'i Jiao rock, Xiaochi Cliff, Dinghu Peak, Zhutan Mountain ... Hatrany ambony, ireo toerana mahafinaritra sy lohasaha idyllika manamorona ny làlana maitso rehetra, hihaona tampoka amin'ny hakanton'ny natiora ny olona rehefa mivily izy ireo manodidina.
Ireo mpiasa ao amin'ny Jinbang Sports, Jin Gutian Technology, Puqi Digital, Red Black Technology, Jinquan Technology, Megani Precision Equipment, Dolby Puqi ary sampana hafa an'ny Golden Stick Holdings dia faly, ary mandeha am-pilaminana amina làlana maitso izy ireo ary ny filaharana mivelatra mihoatra ny 200 metatra. , Nanjary ny "scenery tsara tarehy indrindra" manamorona ny làlana maitso amin'ny andro. Mpiasa maro no nilaza hoe: "Tena tsara ny tontolo iainan'i Jinyun, afaka manao asa sy fiainana isika. Mila miasa mafy eto isika mba hahatsapantsika ny lanjantsika eo amin'ny fiainana".
Tamin'ny 15 ora tolakandro dia nisokatra ny rahona ary ny fiposahan'ny masoandro, tara-masoandro volamena dia hita taratra teo amin'ny Dinghu Peak sy ny Xuanyuan Hall, lanonana manetriketrika sy manetriketrika ny fiankohofana amin'ny razana Jinbang Holdings Co., Ltd. Mpiasa an'arivony no nijoro teo amin'ny kianja manoloana ny tempoly hivavaka amin'ny fahalehibiazan'ny firenena sinoa. Ilay razana Xuanyuan Huangdi dia mahatadidy ny fahamendrehan'ilay razana ary manome aingam-panahy ny fampandrosoana ny orinasa tsorakazo volamena.
Natomboka tamin'ny amponga sy lakolosy ny fotoam-pivavahana tamin'ny razana. Ny gadona amponga 34 dia maneho faritany 34, munisipaly, faritra mizaka tena, ary faritra fitantananana manokana, ary ny lakolosy 15 dia mitentina 1,5 miliara teratany sinoa sy sinoa erak'izao tontolo izao. Ny lohan'ny mpisorona, Jinbang Holdings, mpikambana ao amin'ny birao ary ny solontenan'ny sampana isan-karazany dia nanome voninahitra an'i Xuanyuan Huangdi tamina fofona avo, harona voninkazo ary sorona biby telo.
Taorian'ny nanoloran'i Xu Yongqiang, filohan'ny Golden Stick Holdings Co., Ltd. divay an'ny Statue Xuanyuan Huangdi, ny solontenan'ny Golden Stick Holdings dia namaky ny sorona sorona ary ny mpandray anjara rehetra dia niankohoka intelo tamin'ny Statue Xuanyuan Huangdi. Vita soa aman-tsara tao amin'ny festival mozika sy dihy kanto ny lanonana.
Ny ra dia miorim-paka ary ampitaina amin'ny taranaka mifandimby. Xuanyuan Huangdi dia razamben'ny olombelona ao amin'ny firenena sinoa, mpisava lalana lehibe ary mpanorina ny sivilizasiona sinoa, ary ny fatorana ara-panahy iraisan'ny zanakalahy sy zanakavavy sinoa ao an-trano sy any ivelany. Ny fanatanterahana tamim-pahombiazana ny fotoam-pivavahana tamin'ny razana Golden Stick Holdings dia nahatanteraka ny nofinofin'ny mpiasa rehetra handray anjara amin'ny fanompoana ny razana Xuanyuan Huangdi.